Monday May 06, 2019 - 17:56:58 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Kadib dagaal xooggan oo maanta gelinkii dambe ka dhacay duleedka degmada Balcad ee Sh/dhexe ayaa khasaara xooggan dhabarka loo saariyay ciidamada dowladda Federaalka.
ciidamo katirsan Al Shabaab
Wararka ka imaanaya deegaanka Yaaqle ee dhaca duleedka degmada Balcad ayaa sheegaya in dagaal saacado badan qaatay uu halkaas ku dhaxmaray ciidamada Shabaabul Mujaahidiin iyo maleeshiyaadka dowladda Federaalka Soomaaliya.
Warar hordhac ah ayaa sheegaya in dagaalkii galabta lagu dilay Abaanduulihii Guutada Labaad ee ciidamada dowladda Gaashaanlle dhexe Cali Cariif ahaana ku simihii taliyaha guutada labaad iyo wuxuuna dhaawac halis ah soo gaaray Ku xigeenkiisi oo magaciisa lagusoo gaabiyay C/Kariim Hilowle.
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayay ku sheegtay in dagaalkii galabta ay ku dishay 11 Askari islamarkaana ay ku gubtay sedax kamid ah gaadiidka dagaalka ee Tiknikada loo yaqaan.
Deegaanka weerarku ka dhacay ayaa udhaxeeyay degmada Balcad iyo deegaanka Xawaadley oo Xoogaga Al Shabaab ay qabsadeen bishii Maarso ee lasoo dhaafay.